ဟာသ Archives - Khitalin Media
ခိုးရာလိုက်သွားတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ စာကိုဖက်ပီး တဲ့နောက်…
သို့ / ချစ်ရပါသော အမေ နဲ့ အဖေ သမီး ခိုးရာနောက် လိုက်သွားပါပြီ။ သမီးကို အဖေနဲ့အမေတို့ ပြုစုနေရမှာ ရှက်ပြီတော့ အားနာလာလို့ပါ။ အမေတို့ ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ် ဆွဲကြှိုး လက်ကောက် တွေကို မယူချင်လို့ အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး သမီးမှန်တင်ခုံပေါ်မှာတင် ထားပြီးမှ သမီးတို့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေရင် အမေတို့ပဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ သမီးအကုန်ယူသွားပါပြီ။ ATM card လေးလည်း ယူသွားတယ် အမေသိတယ်မဟုတ်လားအခုခေတ်က လမ်းခရီးမှာ ငွေကိုင်ရင် အန္တရာယ် များ တယ်လေ။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် လို့ အမေတို့ပဲ သင်ပေးခဲ့တာ သမီး မမေ့ဘူး။ သမီး ချစ်သူကလည်း ရိုးရိုးသားသားပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ ယောင်္ကျားလေး ဆိုတော့လည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ … Read more
အမျိုးသမီးရဲ့ရင်သားကို ကိုင်ကြည့်ရုံနဲ့ အသက်အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့ ဆရာကြီးကိုမှ ပညာစမ်းမိတဲ့ ဘောစိမမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
January 21, 2022 by Khitalin Media
Unicode ဘောစိမမတယောက်…သူ့မရဲ့လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ….မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ် ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်သွားပေမဲ့မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့…သူမရဲ့နုပျိုနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ကျေနပ်ပြီးပြုံးနေတယ် ရုပ်ကနုပျိုသွားတော့…သူမရဲ့စိတ်ကလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီး…အိမ်ပြန်လမ်တလျှောက်လုံးမှာ… သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက တကယ့်ကို…ဖျက်လတ်သွက်လတ်နေတာပါ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့မြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူ…တပါးသူတွေရော သူမအပေါ်…ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ…သိချင်လာတယ် အာ့နဲ့..ဖိနပ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး…ဖိနပ်တရံဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ…အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ် ” ဟိတ် ! မမတခုမေးရင်မောင်လေးစိတ်မဆိုးဘူးထင်တယ်” ” မမ အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား ” ” ၃၂ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” အို ! မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရယ်” ” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မွမွ ” ဆိုင်ထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့သူမဟာ ပီတိနဲ့အတူတိမ်တွေကိုစီးမျောနေရသလိုပါ နောက်ထပ် KFC ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် ကောင်တာကကောင်မလေးကို သူ့အသက်ကို…ခန့်မှန်းခိုင်းပြန်တယ် ” ၃၀ တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ် ” ” မမ ဒီနေ့ပဲ အသက် … Read more
ဆယ်ခါကြည့် ဆယ်ခါလုံးရီရတယ်။ တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်ရင် အူလိမ်ပြီးသေနိုင်တယ်…
ဆယ်ခါကြည့် ဆယ်ခါလုံးရီရတယ်။ တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်ရင် အူလိမ်ပြီးသေနိုင်တယ် ထားဝယ်သူ ချွေးမနဲ့ အလယ်ပိုင်းယောက္ခမတို့ ဗွီဒီယိုကောလ်ပြောနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်မှာ လူ ကြည့်မရမ်းများပြီး ကြည့်မိသူတိုင်းက အူလိမ်အောင်ရီရလို့ လူတိုင်းကြည့်တိုင်း သဘောကျကြေပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ စတက်လာနေတာ ခန့်မှန်း ၂၀၁၉ လောက်ကတည်းကလို့ ယူဆရပေမယ့် ယခုအချိန်အထိ ဘယ်နှစ်ခါပြန်ကြည့်ကြည့် မရိုးသွားပဲ လူကြည့်များနေဆဲပါ။ တင်ပြပေးနေကြသူများကလည်း ကာယကံရှင်များရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းလိုစိတ်မရှိပဲ လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင် ရယ်မောစေ လိုသောစိတ်ဖြင့်တင်ပြပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုရယ်မောရသူများကလည်း ကာယကံရှင်များကို ချစ်ခင်လျှက်ကြည့်ရှုပြောဆိုနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Video Player 00:00 05:51 ဆယ္ခါၾကည့္ ဆယ္ခါလုံးရီရတယ္။ တစ္ေနကုန္ထိုင္ၾကည့္ရင္ အူလိမ္ၿပီးေသနိုင္တယ္ ထားဝယ္သူ ေခၽြးမနဲ႔ အလယ္ပိုင္းေယာကၡမတို႔ ဗြီဒီယိုေကာလ္ေျပာေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈ ကြန္ယက္မွာ လူၾကည့္မရမ္းမ်ားၿပီး ၾကည့္မိသူတိုင္းက … Read more
ကွမ်းယာထုပ်လေးကို EVAထဲထည့်ပြီး စပရိုက်လုပ်လိုက်သောအခါ…
မနက္​ကက်​ေနာ့​ေကာင္​မ​ေလးနဲ႔လမ္​း​ေလ်ွာက္​ထြက္​​ေတာ့၊အဝိုင္​းႀကီးထိပ္​နားမွာ မုန္​႔ဟင္းခါးစားၾကတယ္​။ တစ္​ပြဲ၃ရာပါ။ႏွစ္​​ေယာက္​လံုး ဟင္းရည္​အဆစ္​ ႏွစ္​ခါ​ေတာင္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္​ ဆိုင္​႐ွင္​မိန္းမႀကီးမ်က္​ႏွာ ပ်က္​​ေနတာသတိထားမိတာနဲ႔ ပိုက္​ဆံ​ေလး႐ွင္းၿပီးထြက္​လာၾကတယ္​။ ရက္​ကြပ္​အဝင္​​ေရာက္​​ေတာ့ သူမက ကိုကိုခန​ေနာ္​ ဆိုၿပီး စတိုးဆိုင္​ထဲ​ေျပးဝင္​သြားတယ္​။ အရင္​ကသူဘာဝယ္​ဝယ္​ က်​ေနာ္​့ကို​ေခၚ​ေနက်၊ခုမ​ေခၚဘူးဆို​ေတာ့ လစဥ္​သံုးပစၥည္​း ဝယ္​တာပဲျဖစ္​မယ္​လို႔ ​ေတြးမိလိုက္​တယ္​။ သူျပန္​​ေရာက္​လာ​ေတာ့ ရက္​ကြပ္​ထိပ္​က အုတ္​ခံုမွာ အ​ေမာ​ေျဖၾကတယ္​။ သူကကိုကို​ေရာ​ေဖာက္​​ေပးတဲ့ ။ EVAအိတ္​​ေလးကို​ေပးတယ္​။က်တနာ္​လည္းထံုးစံအတိုင္း သြားနဲ႔ကိုက္​​ေဖာက္​လိုက္​တာ​ေပါ့၊အ့မွာ မ်က္​ရည္​က်မလိုျဖစ္​သြားခဲ့ရတယ္​။ ဟုတ္​ပါတယ္​ မုန္​႔ဟင္းခါးစားထားလို႔ ခံတြင္းခ်ဥ္​​ေနတာ​ေလ။သူကြမ္းယာထုပ္​ေလးကို EVAထဲထည္​့ၿပီး စပ႐ိုက္​လုပ္​တာ၊က်​ေနာ္​ျဖင္​့အရမ္း​ေပ်ာ္​လိုက္​တာဗ်ာ။ က်​ေနာ္​စား​ေနက် 92နဲ႔ အုန္းစိမ္း ကိုသူမွတ္​မိ​ေနတယ္​။ ဒီpostကို ႂကြားဝါလိုတဲ့စိတ္​နဲ႔ တင္​ရတာမဟုတ္​ပါဘူး။​ေပ်ာ္​လြန္းလို႔ပါဗ်ာ။အရမ္​းခ်စ္​တယ္​​ေခး​ေလး မြမြ။😘😘😘😘 Nandar Min Paing Unicode မနက်ကကျနော့ကောင်မလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တော့၊အဝိုင်းကြီးထိပ်နားမှာ မုန့်ဟင်းခါးစားကြတယ်။ တစ်ပွဲ၃ရာပါ။နှစ်ယောက်လုံး ဟင်းရည်အဆစ် နှစ်ခါတောင်းပြီးတဲ့အချိန် ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးမျက်နှာ ပျက်နေတာသတိထားမိတာနဲ့ ပိုက်ဆံလေးရှင်းပြီးထွက်လာကြတယ်။ ရက်ကွပ်အဝင်ရောက်တော့ သူမက ကိုကိုခနနော် … Read more
ေယာက်ၤားလိုခ်င္လြန္းလို႔ ေဗဒင္ဆရာဆီသြားေမးမိတဲ့ အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ အျဖစ္
တစ္ခါတုန္းက အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ ေယာကၤ်ားလိုခ်င္လြန္းလို႔ ေဗဒင္ဆရာဆီသြားေမးတယ္။ “ခင္ဗ်ားမွာ အိမ္ေထာင္က်မယ့္ဇာတာ ရွိပါတယ္´´ အပ်ိဳႀကီးခင္မ်ာ အရမ္းေပ်ာ္သြားၿပီး “ဟီ ဟိ ဆရာ ဒါဆို ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္ အိမ္ေထာင္က်မလဲတိတိက်က်ေလး ေဟာလို႔ရရင္ ေဟာေပးပါဆရာရယ္´´ “အိမ္း ဒါကေတာ့ ….. ခင္ဗ်ားရဲ့ကံဇာတာ အေပၚမူတည္ၿပီး နိမိတ္ေကာက္ယူတဲ့ အေဟာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရမွာပဲ… ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီညပဲ ရြာထဲကို လမ္းေလၽွာက္ထြက္ရင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ၾကားရတဲ့ အသံ နိမိတ္ကိုေကာက္ယူရမယ္´´ “ဟုတ္ကဲ့ ဘယ္လိုေကာက္ယူရမွာလဲရွင့္…အဟိ ´´ “ဥပမာ – တစ္ ဆိုတဲ့ အသံကို ၾကားရရင္ ခင္ဗ်ား တစ္လအတြင္း အိမ္ေထာင္က်မယ္ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အသံကို ၾကားရရင္ ႏွစ္လအတြင္းေပါ့ဗ်ာ´´ အပ်ိဳႀကီး အေပ်ာ္လုံးဆို႔ၿပီး အိမ္ျပန္သြားတယ္ ည ၇ နာရီေလာက္က်ေတာ့တိတ္တိတ္ေလး … Read more
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ)
January 11, 2022 by Khitalin Media
Unicode အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ လူငယ် – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား သူဌေး – အားပါတယ်ဗျ လူငယ် – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား သူဌေး – ရတာပေါ့ဗျ လူငယ် – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ… လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် ကွန်ဒုံး (၃)ခုရယ် ဓားမြှောင်( ၆ )ချောင်းရယ်…. လက်ဖက်ရည် (၂ )ခွက်ရယ် ရနိုင်မလားလို့ သူဌေးကိုမေးတယ်။ သူဌေးကလဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူအနဲငယ် အံသြသွားပြီး စိတ်ရှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ လူငယ်ကို မေးစရာတွေရှိလာတယ်။ လူငယ်ကအခန်းကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် … Read more
January 10, 2022 by Khitalin Media
2022 အတြက္ သၾကၤန္စာ ထြက္ေပၚလာပါၿပီ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ (ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္လိုက္ပါ) 2022 အတြက္ သၾကၤန္စာ ထြက္ေပၚလာပါၿပီ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ (ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္လိုက္ပါ) ဤႏွစ္တြင္ သိၾကားမင္းသည္ ဘီလူးကိုစီး၍ လက္ယာဘက္တြင္ သံလ်က္ကိုင္လွ်က္ လက္ဝဲဘက္တြင္ ေရဖလားကိုင္ကာ လူ႔ျပည္သို႔ ဆင္းအံ့။ ႏွစ္စဥ္ အေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါလာတတ္ေသာ မာဒလိနတ္သားသည္ ဤႏွစ္တြင္ လူ႔ျပည္သို႔အေစာႀကီးေရာက္ေနအံ့။ ထို႔ေၾကာင္ သၾကၤန္ရက္အတြင္း မိုး႐ြာလွ်င္ ေရပါအံ့။ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ေျမတုန္အံ့။ မုန္တိုင္းတိုက္လွ်င္ အေျခမခိုင္ေသာ သစ္ပင္မ်ား က်ိဳးက်အံ့။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သၾကၤန္ရက္အတြင္းေရကစားထြက္လွ်င္ အဝတ္အစားမ်ား စိုအံ့။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ခိုးရာေနာက္ လိုက္လွ်င္ အိမ္ေထာင္က်အံ့။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ေစ်းသြားဝယ္လွ်င္ ေငြကုန္အံ့။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အရက္ေသာက္လွ်င္ မူးအံ့။ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ကြမ္းစားလ်င္ ပါးစပ္ရဲအံ့။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ဆိုင္ကယ္စီးလွ်င္ ဆီကုန္အံ့။ … Read more
ဆရာရဲ့အိမ်ကို ဘုရားပန်းသွားလဲပေးခဲ့မိတဲ့ ၁၆နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်…
January 3, 2022 by Khitalin Media
Unicode ဆရာရဲ့အိမ်ကို ဘုရားပန်းသွားလဲပေးခဲ့မိတဲ့ ၁၆နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်… ကျောင်း ဆရာအိမ်မှာ ပန်းအိုးလဲပေးရင်းကနေ စိတ်ဖောက်သွားတဲ့ တောသူမလေး မိအေးမိအေး တဟင့်ဟင့်ရှိုက်နေလေသည်..။ မျက်ရည်များစိမ့်ဖြာဝေ့ဝဲ၍ဘဝကိုအစားခံလိုက်ရသလို..တလှိုက်လှိုက်ဖိုငင်နေသည်။ “သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” မိအေး ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ခါရမ်းနေလေသည်..။အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မြသစ် ခြေမကိုင်လက်မကိုင် မိဖြစ်နေလေသည်..။တောသူတောင်သား.. ရိုးသားတဲ့သူတို့သားအမိလေးမှာ..အခုလို. ကြမ္မာငင်လာရတယ်လို့..။“ဒီမှာ မိအေး ညည်းဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး.. ကာယကံရှင်ကဘာတဲ့လဲ ညည်းကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့လား.. “ဟင့်အင်း အမေ..သူ သိတောင်မသိသေးဘူး” “ဟင်..ဟုတ်လား ပြောပြောသမီး.. ဘယ်သူလဲ အမေ ကောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီး.. ဒီကိစ္စတာဝန်ယူပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ် အမေတို့ သားအမိအရှက်တကွဲအကျိုးနည်း မဖြစ်ခင်လေး..” “ဟင့် ဟင့် ဟီးအဟီး..” မိအေး ငိုသာငိုနေလေတော့သည်“ငိုနေလို့ မပြီးဘူးသမီး အမေတို့သားအမိ … Read more
လကရြှိ တောငကြှီးက ထိတလြန့စြရာအဖှဈအပကွြ
December 29, 2021 December 29, 2021 by Khitalin Media
လက်ရှိတောင်ကြီးက ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက် … ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ၂၅.၁၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက် ၇နာရီခွဲလောက် စစ်စံထွန်းဈေးနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ဈေးရှေ့နားမှာ လူတွေအထိတ်တလန့်နဲ့ အုန်းအုန်းကျက်ကျက် ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ ကိုယ်လဲ စပ်စုချင်တာနဲ့ ပြေးသွားလိုက်တယ်။ အနားရောက်တော့ ၄/၅ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ယောက် တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ငိုနေတာတွေ့လို့ တစ်ချို့လူကြီးတွေက ဝိုင်းပြီး မေးမြန်းနေကြတယ်…..။ မိဘနဲ့ဈေးထဲမှာ ကွဲသွားတာလား.. မိဘတွေက ကလေးကိုဂရုမစိုက်ဘူး… သားကဘယ်မှာနေတာလဲ… ဘယ်သူကအနိုင်ကျင့်လိုက်လို့လဲ.. ဒီလောက်လူတွေအများကြီးရှိတာ လုပ်ရဲတာ အံ့ဩပါ့ တော် ဈေးကသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုအကြောင်းကြား.. သူလာတဲ့နေရာကိုပြန်လိုက်ကြည့်.. ရဲခေါ်မှရမှာ…ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးဝေဖန်အကြံပေး ဆရာကြီးလုပ်တဲ့သူလုပ်..။ ထုံးစံအတိုင်း ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကရိုက်… ဖုန်းဆက်တဲ့သူကဆက်… ဆူညံပွက်လောရိုက်နေကြတယ်…။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကလေးအမေအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကလေးကိုချော့မော့ပြီး သား … Read more
လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ပညာပြလိုက်တဲ့အဖွားအို
December 27, 2021 by Khitalin Media
Unicode လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးတွေကို ငမ်းချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို လှလှပပ ပညာပြလိုက်တဲ့အဖွားအို အသက်၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးက သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးကိုအချစ်စမ်းကြည့်မယ်သွေးတိုးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ နုနုထွားထွား အပျိုပေါက်မလေးကို ငေးမောရင်း သူ့ ချစ်ဇနီးကို မေးတယ် ။ ငါ ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ရင် မင်းသဝန်မတိုဘူးလား ? ဇနီးသည် အဖြေက တိုရှင်း လိုရင်းပဲ ။No not at all !လုံးဝ လုံးဝ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ Why ? လမ်းဖြတ်သွားတာမြင်တိုင်း ဇွတ်အတင်းလိုက်ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတွေလို ပြေးလိုက်လို့လဲမမှီနှိုင်ကိုက်လည်း မကိုက်နှိုင် မှီလည်းမမှီနှိုင် ဟောင်လို့ နားငြီးတာပဲရှိတာ ဘာသဝန်တိုစရာရှိလဲ ???? ဘာမှာမစွမ်းဆောင်နှိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်မှ ဖြစ်ခြင်တာတွေရှေ့တန်းတင် သူဘဲငါဘဲလက်ရုံးတန်းနေလည်းအပိုဘဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့…… 😁😁😁 မှတ်ကရောပဲ … Read more